Gabdhaha kubbadda laliska ee Kenya oo u xayd-xaydanaya Tartanka Afrika - Sabahionline.com
Gabdhaha kubbadda laliska ee Kenya oo u xayd-xaydanaya Tartanka Afrika
Koobka Horyaalka kooxaha gabdhaha kubbadda laliska ee Afrika ayaa toddobaadkan ka furmi doona Kenya, iyada oo kooxda Xabsiyada Kenya ee haysata koobkaas ay u xayd-xaydanayso in ay ku guulaysato koobkeedii afraad, sida uu Isniintii (7-dii May) qoray wargayska Daily Nation ee Kenya.
Laba koox oo Kenyan ah oo u tartamaya koobka kubbada laaliska ee Afrika
Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa doonaya in uu horu-mariyo hibada isboortiga liita
Kenya Pipeline oo guul ku furtay kubbadda laliska ee Afrika
Kenya ayaa waxa matali doona saddex kooxdood oo kala ah Prisons (Xabsiyada), Pipeline (Dhuumaha) iyo kooxda Bangiga Ganacsiga Kenya, iyada oo la filayo in kooxahan martida loo yahay ay hantiyaan tartanka.
“Saddexdii sano ee la soo dhaafay kooxaha Kenya ayaa hantiyayey tartanka,” ayuu yiri Evans Wasike oo ah sarkaal ka tirsan Xiriirka Kubadda Laliska ee Kenya, sida uu ka soo xigtay wargayska Business Daily Africa. “Waxannu rajaynaynaa in gabdhaha maxalliga ah intii karaankood ah ay soo qaddimaan cayaartooda ugu wanaagsan waxanuna ku kal-sannahay in ay wacdaro dhigi doonaan, laakiin waxan sidoo kale wal-wal ka qabnaa khatarta nooga iman karta kooxaha kale, gaar ahaan kuwa ka socda Waqooyiga Afrika.”
Tababaraha kooxda Prisoners David Lung’aho ayaa Daily Nation u sheegay, “in Gabdhuhu ay hayaan niyad wanaagsan, laakiin haddana howshu wayn nagu adkaan doontaa, bacdamaa aan difaacanayno koobka. Kooxo badan ayaa isku dayi doona in ay naga hor-istaagaan in aan ku guulaysanno koobkeenna afraad.”